इतिहासमा आज – मक्कादेखि मदिनासम्म मोहम्मदको हिजरत | Ratopati
personरातोपाटी exploreकाठमाडौं access_timeअसोज ८, २०७७ chat_bubble_outline3
आज २४ सेप्टेम्बर । सन् ६ सय २२ मा ईस्लाम धर्मका संस्थापक पैगम्बर महोम्मदले मक्कादेखि मदिनासम्म हिजरत (धार्मिक यात्रा) पूरा गरेका थिए । मोहम्मद आफ्नो समयका प्रभावशाली धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक नेता हुन् । मक्कामा उनको जन्म ५ सय ७० मा भएको थियो । उनी जन्मनुअघि नै बाबुको निधन भइसकेको थियो, ६ वर्षको छँदा आमाको निधन भयो । ८ वर्षको छँदा हजुरबुबाको निधन भएपछि मोहम्मदलाई हुर्काउने काम काका अबु तलिबले गरे । सुरुमा मक्कामै बसेर मोहम्मदले व्यापार गरिरहेका थिए । यसक्रममा उनी एक सत्यवादी तथा इमान्दार व्यक्तिका रुपमा प्रसिद्ध थिए । ४० वर्षको उमेरमा उनले नुबुवत (आफू अल्लाहको नबी तथा रसूल (सन्देष्टा) भएको कुरा) अरु सामु घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई इस्लाम धर्मावलम्बीहरुले अल्लाहका सन्देष्टा भनेर अनुसरण गर्न थाले।
मक्कामा उनले झन्डै १ सयको हाराहारीमा आफ्ना अनुयायीहरु बनाएका थिए । तर, यी अनुयायीहरुलाई त्यहाँ कडा यातना दिइयो, महोम्मदकै हत्याको षडयन्त्र भयो । त्यसपछि उनी मदिनातर्फ लागे ।
२४ सेप्टेम्बरमा उनले हिजरत अर्थात मदिनाको यात्रा पुरा गरे, जहाँ भव्य स्वागत भयो । यहाँ उनले आफ्नो अनुयायीहरुलाई संयोजित गरे, त्यसैले यस दिनलाई ईस्लाम धर्ममा महत्त्वपूर्ण दिनका रुपमा लिइन्छ । यसै दिनलाई ‘पहिलो दिन’ मानेर केहीपछि ईस्लामिक क्यालेन्डर ‘हिजरी’ जारी भएको थियो । मदिनामा मोहम्मदले ईस्लाम धर्मको खुबै प्रचार गरेका थिए, यहाँ हजारौँ मानिसहरुले धर्म अपनाएर मोहम्मदलाई सन्देष्टा माने ।
६ सय ३० तिर मोहम्मद आफ्ना अनुयायीहरुको ठूलो संख्यासहित जन्मस्थल मक्का यात्रामा फर्किए, भनिन्छ यस यात्रामा १० हजार जना सहभागी थिए, मोहम्मदले सबैप्रति स्नेह र दयाभाव प्रकट गरेका थिए ।
सन् १९४८ – होन्डा मोटर कम्पनीको स्थापना ।
सन् १९९३– कम्बोडियामा राजतन्त्र पुनस्र्थापना, नोरोडोम सिहानुक राजगद्दीमा ।
सन् २००७ – बर्माको यागुंनमा सरकार विरोधी प्रदर्शन, २० वर्षयताकै शक्तिशाली प्रदर्शनमा ३० हजारदेखि १ लाख मानिस सहभागी ।
सन् २००७– भारतलाई पहिलो टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट विश्वकपको उपाधि ।
सन् २०१३– दक्षिणी पाकिस्तानमा ७ दशमलव ९ म्याग्नेच्युडको भूकम्प, कम्तिमा ३ सय २७ व्यक्तिको मृत्यु ।
२०१५– साउदी अरेबियामा हजका दौरान कम्तिमा ११ सय व्यक्तिको मृत्यु, ९ सय ३४ जना घाइते ।
*यसअघि केही तथ्यगत त्रुटि भएकामा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ
रातोपाटीको नीति कुनै धर्मजाति, सम्प्रदायको भावनामाथि ठेस पुर्‍याउने नरहेको जानकारी गराउँदछौं । यसअघि राखिएको मोहम्मदको प्रतिकात्मक फोटो पनि पाठकहरुको प्रतिक्रियाको सम्मान गर्दै सच्याइएको छ ​
Sept. 24, 2020, 12:38 p.m. अलिदा फतिमा कदरीया
यो समाचारमा भएका गल्तिहरु। १.उहाको फोटो बनाउनाले मुस्लिमहरुको आस्थामा ठेस पुगेको छ किनकि उहाको फोटो कहिल्यै पनि लिइएको थिएन र यो काल्पनिक फोटो बनाउनु मुस्लिमको आस्थामा प्रहार हो। यस्लाइ तुरुन्त हटाउनुहोला। २. ४३होइन,उहाले ४०बर्षको उमेरमा नुबुवत(आफू अल्लाहका सन्देष्टा भएको कुरा)अरुको अघि घोषणा गर्नुभएको थियो। यो सच्याउनुहोला। ३.उहालाइ इस्लाम धर्मावलम्बीहरुले अल्लाहका सन्देष्टा भनेर अनुसरण एवम मान्ने गर्छ्न,उहालाइ भगवान भन्दैनन र मान्दैनन। यो सच्याउनुहोला। आसा गर्छौ तपाइले यो सुधार गर्नुहुनेछ अन्यथा धेरै हजारको तपाइको पेज रिपोर्ट गरिनेछ र कानुनी कारवाही पनि गरिनेछ। अहमद रजा गोनपा-२,गोर्खा
Sept. 24, 2020, 12:34 p.m. Sahir Miya
There is Mistake in this posta
Sept. 24, 2020, 12:10 p.m. Sajid Ahamad
https://ratopati.com/story/148198/2020/9/24/history-today यो समाचारमा भएका गल्तिहरु। १.उहाको फोटो बनाउनाले मुस्लिमहरुको आस्थामा ठेस पुगेको छ किनकि उहाको फोटो कहिल्यै पनि लिइएको थिएन र यो काल्पनिक फोटो बनाउनु मुस्लिमको आस्थामा प्रहार हो। यस्लाइ तुरुन्त हटाउनुहोला। २. ४३होइन,उहाले ४०बर्षको उमेरमा नुबुवत(आफू अल्लाहका सन्देष्टा भएको कुरा)अरुको अघि घोषणा गर्नुभएको थियो। यो सच्याउनुहोला। ३.उहालाइ इस्लाम धर्मावलम्बीहरुले अल्लाहका सन्देष्टा भनेर अनुसरण एवम मान्ने गर्छ्न,उहालाइ भगवान भन्दैनन र मान्दैनन। यो सच्याउनुहोला। आसा गर्छौ तपाइले यो सुधार गर्नुहुनेछ अन्यथा धेरै हजारको तपाइको पेज रिपोर्ट गरिनेछ र कानुनी कारवाही पनि गरिनेछ ।